War Deg Deg ah Waqooyiga Kuuriya oo burburiyay hubka Nuclear-ka ee ay lahayd – Daily Som
War Deg Deg ah Waqooyiga Kuuriya oo burburiyay hubka Nuclear-ka ee ay lahayd
By Staff on May 12, 2018 No Comment
North Korea ayaa sheegtay in ay ku marti qaadi doonto warbaahinta caalamiga ah munaasabd saddex maamlmood soconaysa oo ay ku burburineeyso goobaha lagu sameeyo hubka Wax Gumaado ee Nukliyeerka.
wakaaladda wararka kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay mar sii horeeysay in ay marti qaadin doonto quburo ku xeeldheer Hubka si ay uxaqiijiyaan bur burinta Hubka, balsa waxaa boga wakaalada laga saaray qoraalka lagu daabacay shalay subax.
Xukuumadda Pyonyang ayaa sheegaty in howshaasi ay ku jiri doonto in la qarxiyo dhuumaha dhulka hoostiisa mara oo laga qaadi doono qalabka wax lagu kormeero iyo dhismayaasha wax lagu baaro .
Munaasabadaas ayaa dhici doonto sedex usbuuc ka hor shir madaxeedka taariikhiga ah ee singapore ku dhex mari doono maadxweynaha Dalka Maraykankja iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un, sida lagu sheegay talefishinaka qaranka ee Kuuriyada waqooyi.
Warkaan ayaa ku soo aadaya xiliuu soo wanaagsanayaayo xiriirkaMaraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana maantawar uu soo saatray lagu sheegay Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo in Maraykanku uu kuuriyada waqooyi ku gacan siinayo dib u dhiska Dhaqaalaha, haddii North Korea ay ogolaato in ay joojiso hubkeeda Nuclear-ka.
War Deg Deg ah Waqooyiga Kuuriya oo burburiyay hubka Nuclear-ka ee ay lahayd added by Staff on May 12, 2018